Qoys Somali ah oo laga saaray Gurigooda 1,5 Milyan Kr oo loo aruuriyay markii bulshada ay falkasi ka Carootay Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaQoys Somali ah oo laga saaray Gurigooda 1,5 Milyan Kr oo loo aruuriyay markii bulshada ay falkasi ka Carootay
Qoys Somali ah oo laga saaray Gurigooda 1,5 Milyan Kr oo loo aruuriyay markii bulshada ay falkasi ka Carootay
February 15, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Norway, Warka ugu akhriska badan 0
Photo: Bjarte Breiteig
Aabe Somaliyeed iyo Xaaskiisa iyo 5 Caruur ah oo ay dhaleen ayaa dhawaan laga saaray guri ay daganaayeen oo ku yaalla Caasimada Oslo ee Dalka Norway.
Sababta guriga looga saaray Faamilkan ayaa Salka ku heysa Dhaqaalaha soo galay oo dhaafay 15,000 kr taasi oo ka dhigan in aysan xaq u laheyn dagnaanshaha guriga dowlada ee ay ku nooyaan mudo 10 sano ah.
Aabaha oo lagu magacaabo Maxamed Jaamac ayaa Racfaan ka qaatay go’anka looga saarayay guriga lakin Maamulka Xaafada Gamle Oslo ayaa booliska ku wargaliyay kiiska waxana aabaha iyo Qoyskiisa loogu yimid guriga iyadoo xoog looga saaray intaasi kadib TV2 ayaa baahiyay dhacdadan waxaana ka gilgishay bulshada Norway kuwaasi oo bilaabay lacag aruurinta.
Qorshaha ayaa ahaa aruurinta lacag dhan 50,000 kr lakin waxay isku badashay 1,5 Milyan waxana ay layaab iyo amakaag ku noqotay Maamulka Degmada guriga kasoo saaray Qoyskan Somaliyed.
Marian Hussein oo ah Musharaxad u taagan Barlamaanka Norway ayaa kamid ah aheyd dadkii ugu horeeyay ee kiiska Banaanka Soo dhigay qofka ugu horeeyay ee lacag aruurinta bilaabay waxa uu ahaa Breiteig.
Sida uu Somaliska u sheegay Gudoomiyaha Jaaliyada Norway Mohamed Abdulkadir waxaa dhoor mar Qoysaska Somaliyed la kulmeen dhibaato lamid ah mida ku dhacday Aabo Maxamed Jaamac taasi oo caawin ka geesteen guud ahaan Dadka Somaliyed.
ugu Danbeyn Aabe Maxamed Jaamac iyo Qoyskiisa ayaa hada la nool Qoys kale oo Qaraabo yihiin waxana Alaabtiisa guriga loo qabtay mudo kooban hadii uu ku qaadan waayo markaasi la tuuridoono lakin sheekada ayaa hada dhinac kale isku badashay oo ah in Qoyska ay dhaqaalo ahaan isku filanyihiin.